राजतन्त्र, कांग्रेस र संघीयताबारे 'सविता माता'को भविष्यवाणी !
धेरै वर्षअघि हाम्रो गाउँमा पृथ्वी ध्वस्त हुने हल्ला चलेको थियो । शायद त्यो हल्ला देशभरि फैलिएको हुनुपर्छ तिनताका । पृथ्वी ध्वस्त हुने हल्लाका कारण गाँउलेहरूले पालेका हाँस, कुखुरा, परेवा र खसीबोका काटेर खान थाले ।
तिनीहरूको कथन थियो, ‘कति दिन त बाँचिएला र बाबै, अब खाएरै मर्ने हो ।’ मासु नखानेहरूले घिउ र भात दबाइरहेका थिए । सबैको मनमा डर थियो – पृथ्वी ध्वस्त भयो भने मीठामीठा खानेकुरा खान पाइन्न भन्ने ।
तर आजको मितिसम्म पृथ्वी ध्वस्त भएको छैन । जल, जमीन र जंगल हाम्रै परिवेशमा छन् । यी हिमाल र महाकाली नदीहरू आ–आफ्नै लयमा उठिरहेका छन्, बगिरहेका छन् । मृगशावकहरू उति नै प्यारो बान्कीमा चरिरहेका छन् बुकी फुल्ने पहाडका यी सुन्दर रनबनहरूमा । सिक्लेसको डाँडामा गुराँसका थुंगाहरूले आफ्नो लालिमाको रंग पोत्न बिर्सेका छैनन् । गोपीकृष्ण हलको पछाडि धराने कालो बंगुरको सेकुवा पोल्न छाडिएको छैन । सबैभन्दा मुख्य कुरा तर्फ सुन्दरीहरूले मुस्कानको वाण हान्न भुलेका छैनन् । यसको मतलब अझै पृथ्वी ध्वस्त भएको छैन ।
सम्झिरहुँ लाग्ने एउटा किस्सा छ । पृथ्वी ध्वस्त हुने हल्ला चलेको तीन महिनाअघि भीम अंकल र म मिलेर एकजना झाँक्रीलाई नराम्रोसँग पिटेका थियौं । बाँसको भाटाले पिटेका थियौं । यति धेरै पिटेका थियों कि त्यो झाँक्री एक महिनासम्म बिस्ताराबाट हलचल गर्न सकेनन् । तर हामीले ती झाँक्रीको उपचार पनि गरेका थियौं । ती झाँक्री एकदिन झमक्क साँझ पर्दा वीरमान काकाको घरमा गएर भनेछन्, ‘तेरो कतार गएको छोरा उतै मर्छ, आउँदैन । ज्युँदो हेर्न मन भए घोर्ले बोकाले पूजा गर्नुपर्छ ।’ यसकारण बोकाको मासु खाने दाउमा –याल चुहाइरहेका झाँक्रीले संयोगवश हाम्रो कुटाइ खाएका थिए ।
तर ती झाँक्रीमा कला भने बहुतै थियो । रिसाएका भनिएका सिमेभुमे, अनेकौं देवीदेउतालाई फकाउने उनमा जुन कला थियो, त्यो कुनै नाम चलेको कविले कागजमा कविता नहेरी मौखिक वाचन जस्तो थियो । घण्टौंसम्म ती अनवरत रूपमा अनेकौं देवीदेवतालाई मायालु भाका हालेर फकाइरहन सक्थे । यी बालबच्चाको के दोष, यी निर्दोष चेलीबेटीको के दोष, चाँडै निको बनाइदेऊ, तिमीलाई कसरी चित्त बुझाउने हो, त्यो बुझाउँला । के गल्ती भयो यी मनुष्यबाट, के कमजोरी भयो, जे भयो अञ्जानमा भयो, माफ देऊ भनेर देउता फकाउँथे ती । तर कुटाइ खाएको भोलिपल्टदेखि तिनले देवीदेउता फकाउने काम बन्द गरेर काठको काम गर्न थाले ।
अर्को पनि एउटा रोचक किस्सा छ । गाउँको मालारानीमा सामुदायिक वन थियो । सामुदायिक वनमा घाँसचोरहरूले फाइदा लुटिरहेका थिए । घाँस काट्न बन्देज त थियो तर केही चलाखहरूले लुकीलुकी घाँस काटिरहेका थिए । घाँसचोर कसरी पत्ता लगाउने ? वनका रुखमा घाँस काटिएको देखिन्छ । यद्यपि कल्ले काटेको हो त्यो भने पत्ता लाग्दैन । केही सीप नलागेपछि अन्ततः एकजना पण्डित बाजेले कडा आइडिया निकाले ।
त्यो के भने, गाउँमा भएका सबै गोठालाहरू चौतारीमा जम्मा हुने अनि ‘मैले सामुदायिक वनमा घाँस काटेको छैन, काटेको भए मेरा दाम्ला नाम्ला सेलाऊन् भनेर भगवद्गीता समातेर कसम खाने । कतिपयले मेरा डिंगाबाच्छा मरून्, ब्याउनी भैंसी तुहिएर मरोस् जस्ता किरिया खाइरहेका थिए । पालैपालो गोठालाहरू हातमा डाम्लो समातेर चौतारीमा उक्लिरहेका थिए भगवद्गीता छोएर कसम खान । तर हामीलाई भने यो प्रक्रियामा कुनै विश्वास थिएन किनभने चोर र भगवद्गीता अनि धर्मकर्म र किरियासँग कुनै सम्बन्ध हुन्न ।
अन्यथा नमान्नुहोला, आखिरीमा निगरानी गरेर हामीले पत्ता लगाएरै छाड्यौं, सामुदायिक वनमा घाँस चोर्ने त त्यही पण्डित बाजेको कान्छा छोरा पो रहेछन् ।
सविता मातालाई भविष्य सोध्न जाँदा मलाई के भनिन् ? त्यो पक्कै लेखेको छु । तर तपार्इंहरूलाई लागेको होला, सुरबेसुरको के लेखिरहेछ यो निशानी पागलले आज ? यसको कुनै कामधन्दा छैन कि कसो भनेर । त्यो सोच्नु स्वाभाविक पनि छ किनभने सधैं देशको मायामा भावविह्वल भएर लेखिरहेको म, यो हप्ताको स्तम्भमा पृथ्वी ध्वस्त हुने कुरा, झाँक्रीका कुरा र पण्डित बाजेका कुरा लेखिरहेको छु । सविता माता र यी घटनाक्रमका किस्सा मेल खालान् कि नखालान् ? त्यो जान्न त केही वर्ष पर्खिनुपर्ला ।
तर माथिका ती किस्साहरू किन स्मरण गरेको हुँ भने म पूरै भौतिकवादी हुँ । म भौतिकवादी विचारधाराबाट प्रभावित नास्तिक मनुष्य हुँ । हुन त म जेसुकै भएपनि त्यसको के अर्थ छ र ? यो ब्रह्माण्डका अर्बौं मानवप्राणीहरूको खर्बौं विचार, आस्था र चिन्तनहरू छन् । कोही ओशो भनेर हिँडेका छन् । कोही जय रामजी की हजुर भन्या छन्, कोही ब्रह्मचारी बनेर हिँडेका छन् । कोही जय शम्भो भन्नेहरू छन् । ओम शान्ति ओमहरू छन् । अल्लाहदेखि येशुसम्म, गौतम बुद्धदेखि सीतारामसम्म । समयक्रमसँगै जन्मिएका यिनै भावनालाई भगवानको रूप दिएर अध्यात्मको बाटोमा डोहो–याउने प्रयास जारी छ ।
भौतिकवादीहरूले धर्मकर्म खासगरी देउतापूजा, व्यक्तिपूजा वा मरेपछि स्वर्ग जान सकिने कुरा इन्कार गर्छन् । भविष्यवाणी त झन् सबैभन्दा पातकी काम हो भन्ने ठान्छन् । काम नगरी सफलता प्राप्त हुँदैन र त्यसका निम्ति प्रार्थनाभन्दा पनि परिश्रम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हो । यही मान्यताका सयौं किताबहरू पढियो । भविष्यको कुरा केवल श्रममा निर्भर हुन्छ, कुनै दैवीशक्तिको दयाले दुवै हातमा लड्डु आउँदैन भन्ने मरो भौतिकवादी मान्यता अहिले पनि जब्बर छ ।
सविता माताको कडा अडान छ – ‘राजा नआइकन देश बन्दैन । र यसका लागि ज्ञानेन्द्रको नाति हृदयेन्द्र राजा बन्ने नै देखेकी छन् सविता माताले । तर हृदयेन्द्र राजा बनेपनि ज्ञानेन्द्र थोरै समयको लागि भएपनि फेरि राजा बन्ने योग छ ।’
बिहानै उठेर काम गर्ने कि पूजा गर्ने ? यसका बारे म बहस गर्न चाहन्नँ । यो कहिल्यै नसकिने बहस हो । तर हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको प्रभाव रहेको यो मुलुकमा राशिफल हेर्ने कुरा, जान्ने ज्योतिष खोजेर ग्रहगोचर हेराउने कुरा सामान्य लाग्छन् । जन्मेपछि चिना बनाउने प्रचलन छ । मेरो पनि चिना थियो, तर हालसालै त्यो हराएको छ । चिना नभएका मानिसहरूले हात हेराउने चलन छ । चिना र हात हेरेर भविष्यका सम्पूर्ण कुराहरूको भरपूर जानकारी लिन सकिन्छ भने म मात्रै किन अल्टर हुने यो देशमा ? त्यसैले सविता माता भेट्न पुगें ।
तर मेरो निजी बुझाइ के छ भने द्वन्द्ववादी मान्यताअनुसार जीवन र जगतमा हुने सबै वस्तु, घटना र प्रक्रियाहरूको उत्पत्ति, विकास र परिवर्तनको मूल कारण नै भौतिक तत्त्वको द्वन्द्वात्मक गतिमा निर्भर हुन्छ । त्यो गति मानवजीवनले पकड्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा प्रमुख हो । संसारका सबै जैविक–अजैविक वस्तु, घटना, प्रक्रिया, सङ्घर्ष र आन्दोलनहरू निरन्तर गति र परिवर्तनको प्रक्रियामा हुने गर्छ ।
सविता माताकोमा भविष्य बुझ्न जाँदा
पूर्वी नेपालको धनकुटा जिल्लामा जन्मिएर आफूसँग भएको त्यो अलौकिक शक्तिलाई प्रयोग गरेर सबैको चित्त बुझाएर जीविकोपार्जन र भविष्यको चिन्ताका कारण भावनात्मक रूपमा टुटेकाहरूको उद्धार गरिरहेकी सविता सरु शर्मा आचार्यलाई भेट्न गएको थिएँ म पूर्व गएको अघिल्लो हप्ताको छेको पारेर । चलचित्रमा र धार्मिक प्रवचनमा देखिने माताहरूभन्दा निकै फरक माता सविता टाइट जीन्स पाइन्ट लगाएर बसिरहेकी थिइन् । सेक्सी देखिन्थिन् ।
तिनले न कुनै अजीब किसिमको माला लगाएकी थिइन्, न निधारमा लामो धर्सो जस्तो डरलाग्दो टीका । कलेज पढ्न जान लागेकी नानीको लूकमा जस्तो बसेकी थिइन् ।
सविता माताको सबैभन्दा चर्चित भविष्यवाणी हो – राजतन्त्र फर्किन्छ । मानिसहरू हल्ला चलाउँछन् – पूर्वयुवराज र पारसको मिलन नगराउनमा पनि सविता माताको ठूलो हात छ भनेर किनभने यी भड्किएका दुई आत्माको मिलन भयो भने दरबारमा कलह हुन्छ, पारसको भाग्यमा झैझगडा मच्चाउने योग छ भन्ने कुरा सविता माताले बुझाएकी छन् । शायद त्यसैले होला, केही दिनअघि पारसले ट्राफिक प्रहरीको सातो काडेका थिए भने तीन मिनेटको पत्रकार सम्मेलनमा कम्तीमा तीनपटक चुरोट सल्काएका थिए ।
त्यस्तै, मेरो ओठ फुटेर रगत निस्क्यो देशमा अनिष्ट हुन्छ भनेर भविष्यवाणी गरेकी सविता माताले खुमबहादुर खड्का जस्ता युवा नेताहरू बित्नुभन्दा केही दिनअघि देशले एकजना नेता गुमाउँछ भनेकी रहिछन् । शायद सविता माताको यिनै अद्भुत क्षमताका कारण नै होला उनी पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको परिवारको भविष्यवाणी गर्दै आइरहेकी छन् । राजाको चित्त बुझाउने काम गरेकी छन् । राजसंस्था फर्किएपछि मात्रै नेपाल समृद्धिको मार्गमा जाने उनको निर्मम भविष्यवाणी छ ।
राजपरिवार मात्र हैन, सविता माताले नेपालका नाम चलेका राजनीतिज्ञदेखि चर्चित कलाकार, उद्योगपतिसम्मको भविष्यवाणी गरेकी छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, शेरबहादुर देउवा, नायिका रेखा थापा लगायतका दर्जनौं चर्चित अनुहारको भूत, भविष्य र वर्तमान हेरिसकेकी सविता माताले ३२ वटा विभिन्न देशको भ्रमण गर्ने अवसर पाएकी छन् । कम्तीमा पनि तीनलाख नेपालीको भविष्यवाणी गरिसकेकी माता सविता अलौकिक शक्तिकै माध्यमबाट देशमा हुने अप्रिय घटनाको समेत भविष्यवाणी गर्दै सचेत रहन सबैलाई आग्रह गर्दै आएकी छन् ।
बहुचर्चित भूतघरको प्रकरणमा यहाँ भूतसुत केही पनि छैन, यो घरमा नाटक रचिएको हो भनेकी थिइन् सविता माताले ।
मलाई के भनिन् त सविता माताले ?
पचास वर्ष काटेपछि डोकोमा बोक्न मिल्ने पैसा कमाउँछस् भन्नुभएको छ उहाँले । त्यसैले होला, एटीएम देख्दा पनि घृणा लाग्न थालेको छ । अब डोकोमै पेसा बोकेर हिँड्न पाएपछि यो नाथे एटीएमको के काम यार जस्तो लाग्न थाल्यो । हालसाल पैसा कमाउन नसक्नुको कारण चाहिँ मेरो घुमफिर गर्ने योग छ रे । एक ठाउँमा मन अडाएर बस्न नसक्ने दिल निशानी मगरको आत्मालाई सही ठेगानामा ल्याउन सविता माताजीले धेरै प्रयास गर्नुभएको छ । उहाँको त्यो प्रयासलाई म उच्च प्रशंसाले सम्मान गर्न चाहन्छु ।
हरेक बिहान उठेर निधारमा रातो टीका लगाउने गरेको छु, जुन टीका माताज्यूले नै दिनुभएको छ । टीकाको साथमा एक गेडा चामल पनि मुखमा हालेर हिँड्न भन्नुभएको छ । शायद फेसबूकबाटै थाहा पाउनुभयो कि कडा भविष्यवाणी गरेर थाहा पाउनुभयो विदेश गएर आउनुभएको रहेछ, फेरि जाने योग छ भन्नुभयो । पानीको सट्टा बीयर खानु हुँदोरहेछ भन्नुभयो । सारै खुशी लाग्यो यो कुरा मिलेको सुन्दा । यसको मतलब यो हैन कि अरू मिल्दै मिलेनन् ।
सविता माताले भन्नुभयो, ‘कन्याहरूले धेरै नै पछ्याउने योग छ । अहिले पनि दुई बूढी भएको देखाउँछ यो हातको रेखाले त । केकस्तो हो सत्य भनेर सोध्नुभयो ।’ अनि भन्नुभयो, ‘जीवनको अन्तिम घडीसम्म आइपुग्दा तिमीले ६ जना महिलासँग बिहे गर्नेछौ, ती सबै अधबैंसे उमेरका हुनेछन् । दुईजना त नानीको आमा पनि हुनेछन्’ भन्नुभयो । तीमध्ये तीनजनासँग मुद्दामामिला चल्ने र तीनजनासँग राम्रै सम्बन्ध कायम हुने भनेर घोषणा गर्नुभयो । ‘जति मुद्दामामिला चलेपनि फैसला भने तिम्रै पक्षमा हुने’ समेत बताउनुभयो ।
कांग्रेसका केही नेताहरू जस्तो कि बालकृष्ण खाँड, कमला पन्त, गगन थापा लगायतका नेताहरूले कांग्रेसको भविष्य बलियो बनाउने माताको उद्घोष छ ।
सविता माताले मेरो हौसला बढाउँदै भन्नुभयो – ‘तिमीले राम्रोसँग राजनीति गरेको भए गृहमन्त्रीसम्म बन्ने योग थियो, तर लाइन बिगारेको रहेछ । अझै पनि राजयोग देखिन्छ’ भन्नुभयो । तिमी ठूलो मान्छे बन्ने थियौ, सबैले मान्ने थिए तर यसका लागि क्षत्रीबाहुनको साथमा हिँड्नू । तिमी क्षत्रीबाहुनको साथमा हिँडेनौ भने ठूलो मान्छे बन्न सक्दैनौ भन्नुभयो । पाठकहरूलाई लाग्ला, निशानीले हावा कुरा लेख्यो भनेर । सोध्नुहोस् सविता मातालाई – उहाँले यो कुरा भन्नुभएकै हो कि तिमी ठूलो मान्छे बन्न क्षत्रीबाहुनको संगत गर्नू भनेर ।
सविता माताले केटीहरू एकदमै पछि लाग्छन्, जोगिएर हिँड्नु अन्यथा तिमी बर्बाद हुन्छौ, खरानी हुन्छौ भन्नुभयो । र यो पनि भन्नुभयो – पहिलोभन्दा दोस्रो घरबार राम्रो छ भनेर । दोस्रो घरबार नानीको आमासँग हुने र उसले बहुत माया गर्ने भन्नुभयो । यसमा मेरो भने फरक विचार छ । अहिलेसम्म माताले भनेको बाटोमा छैन म । हेरांै भविष्यमा के हुन्छ, त्यो अहिले नै भन्न सकिन्न । तर ब्रह्मचारीको बाटोमा छु, जोगी, साधुसन्तको मार्गमा छु । खै, ६ वटी नखरमाउलीसँग कसरी बिहे सम्भव होला र, यार ?
सविता माताको जय होस् !
अहिले सविता माताको कडा अडान छ – ‘राजा नआइकन देश बन्दैन । र यसका लागि ज्ञानेन्द्रको नाति हृदयेन्द्र राजा बन्ने नै देखेकी छन् सविता माताले । तर हृदयेन्द्र राजा बनेपनि ज्ञानेन्द्र थोरै समयको लागि भएपनि फेरि राजा बन्ने योग छ ।’ शायद श्रीपेच हृदयेन्द्रलाई बुझाउनका लागि होला । पुरानो धर्मसंस्कार, पुरानो रीतिरिवाज, पुरानो चालचलन बिर्सिएर कुनै पनि हालतमा देश अघि बढ्न नसक्ने माताको ठोकुवा छ ।
राजसंस्था नेपालको बुवा भएको र बुवाविनाको देश टुहुरो हुने सविता माताको भनाइ छ । नेपाल हिन्दूराष्ट्र नभई विकास नहुने माताको कथन छ । ज्ञानेन्द्र सरकार हुँदा उहाँले चाहेको भए नेपाललाई सिरिया बनाउन सक्नुहुन्थ्यो तर देशको मायाले नेपाल नै बनाउनुभयो भन्ने माताको विचार छ ।
राजनीतिका बारेमा पनि भविष्यवाणी गर्ने माताले नेपाली कांग्रेसको भविष्य राम्रो भएको बताएकी छन् । कांग्रेसविना यो देश भुटान र सिक्किम हुने देखेकी छन् माताले । कांग्रेसका केही नेताहरू जस्तो कि बालकृष्ण खाँड, कमला पन्त, गगन थापा लगायतका नेताहरूले कांग्रेसको भविष्य बलियो बनाउने माताको उद्घोष छ । साथै मुलुकले संघीयता धान्दैन । संघीयता भनेको एक कठ्ठा जग्गा दशजनालाई बाँडेजस्तै हो भनेर भन्नुभएको छ ।
यी लेखकका निजी विचार हुन् । – सं